ဆိုးလျရှားသာ နညျးပွနရောက ထုတျခံခဲ့ရမယျဆိုရငျ မထငျမှတျပဲ ယူနိုကျတကျနညျးပွမှာ ရျောနယျဒို ဖွဈလာတော့မလား…? – MAN U FAN CLUB
October 27, 2021 Kaung Thant Articles 0
ယူနိုကျတကျနညျးပွဘဝကနေ အခြိနျမရှေး ပွုတျသှားနိုငျခွရှေိလာတဲ့ ဆိုးလျရှားရဲ့အခွအေနကွေောငျ့
အခုဆိုရငျ ဗွိတိနျဘှတျကီဒိုငျတှကေ ဆိုးလျရှားနောကျမှာ ယူနိုကျတကျနညျးပွ ဘယျသူဖွဈလာမလဲဆိုပွီး
လီဗာပူးလျကိုအရှကျတကှဲရှုံးနိမျ့ပွီးနောကျမှာ ယူနိုကျတကျ ပရိသတျတှနေဲ့ ကစားသမားတှကေ ဆိုးလျရှား ရဲ့နညျးဗြူဟာအပျေါ
ယုံကွညျမှုကဆြငျးသှားခဲ့ကွသလို အသငျးကထှကျသှားဖို့ ဖိအား ပေးမှုတှရှေိလာခဲ့ပါတယျ။
လီဗာပူးလျနဲ့ပှဲမှာ ပထမပိုငျးပွီးခြိနျမှာတငျ ကှငျးထဲက ယူနိုကျတကျ ပရိသတျအတျောမြားမြားက ကှငျးထဲကနထေပွနျကုနျကွတာကွောငျ့
အဲ့သညျ့ပှဲအပွီးမှာ ဆိုးလျရှားခကျြခငျြး အထုတျခံရတော့မယျဆိုပွီး သတငျးတှထှေကျလာခဲ့ပါသေးတယျ။
ဒီလိုဖွဈရပျကွောငျ့လဲ တနင်ျလာနကေ့ဆိုရငျ ယူနိုကျတကျရဲ့မနျးနေးဂငျြးဒါရိုကျတာ ရဈခတျြအာနိုးလျဟာ
ခြိနျးဆိုထားတဲ့ appointment တှေ အားလုံးကို ပယျဖကျြပွီး ဂြိုဝယျ ဂလဇောနဲ့ အရေးပျေါ တှဆေုံ့မှုကို ခကျြခငျြးလုပျခဲ့ပါတယျ။
ဆှေးနှေးမှုအပွီးမှာတော့ ယူနိုကျတကျ ဘုတျအဖှဲ့က အကျဝုဒျဝကျချ, ရဈခတျြအာနိုးလျ နဲ့ ဆာအဲလကျဈဖာဂူဆနျတို့က
ဆိုးလျရှားကို ဆကျလကျထောကျခံပေးခဲ့တာကွောငျ့ စပါးနဲ့ပှဲပွီးဆုံးခြိနျအထိတော့ ယူနိုကျတကျမှာ ဆိုးလျရှား ဆကျရှိနဦေး မယျလို့ယူဆရပါတယျ။
လကျရှိမှာလညျး ဆိုးလျရှားဟာ ကာရငျတနျလကေ့ငျြ့ရေးကှငျးမှာ အသငျးရဲ့ကစားသမားတှနေဲ့အတူ
စပါးနဲပှဲအတှကျ လကေ့ငျြ့ရေးအစီအစဉျတှေ ပွုလုပျလြှကျရှိနတေယျလို့လညျး သတငျးတှကေဖျောပွထေားပါတယျ။
သဘောကတော့ ယူနိုကျတကျဘုတျအဖှဲ့က ဆိုးလျရှား အပျေါ နောကျဆုံးအနနေဲ့ အခှငျ့အရေးပေးထားတယျဆိုတဲ့ အဓိပ်ပါယျပါပဲ။
ဒါ့အပွငျ ဗွိတိနျမီဒီယာအခြို့တို့မှာလညျး ယူနိုကျတကျဘုတျအဖှဲ့က ဆိုးလျရှားကို လာမယျ့သုံးပှဲအထိ အခှငျ့အရေးပေးထားတယျ လို့လညျးသိရပါတယျ။
ဒီအခြိနျမှာ အံသွစရာသတငျးတဈခု ထပျဖွဈလာတာက ခရစ်စတီယာနိုရျောနယျဒိုဟာ
ဒီသတငျးဟာ ဗွိတိနျဘှတျကီဒိုငျ Paddy Power က ခရစ်စတီယာနိုရျောနယျဒိုကို (၁၉ လေး /၁ လေး) နဲ့ ယူနိုကျတကျ နညျးပွ နရောအတှကျ ကွေးဖှငျ့လာခဲ့ပွီး နောကျပိုငျး
ရျောနယျဒိုက နညျးပွ ဖွဈလာနိုငျခွစောရငျးမှာ နံပါတျ(၇) အဖွဈ ရောကျရှိလာခဲ့ရာကစတငျခဲ့တာပါ။
လကျရှိအခြိနျတှငျ Paddy Power ရဲ့ယူနိုကျတကျ နညျးပွရာထူးအတှကျ ရပေနျးအစားဆုံးစာရငျးမှာ
အနျတိုနီယိုကှနျတီကို ၈/၁၁ ဖွငျ့ဖှငျ့လှဈပေးထားပွီး ဘရနျဒနျရျောဂြာ(၆/၁)၊ဇီဒနျး(၉/၁)၊
နညျးပွနရောအတှကျ ရပေနျးစားနတေဲ့စာရငျးမှာ ရျောနယျဒိုဟာ နညျးပွအတှအေ့ကွုံရငျ့နကွေတဲ့ ရနျနဈချ၊လူစီယနျဖာဗရီ၊
အယျလီဂရီ၊ မိုကျကယျကာရဈ၊ ဒါရငျးဖလကျခြာတို့ထကျ ပိုပွီး လူကွိုကျမြားနပေါတယျ။
ဒီနှဈ နှရောသီအပွောငျးအရှဈေ့ေးကှကျ ပိတျခါနီးအခြိနျမှာ ယူနိုကျတကျကို ပွနျလညျရောကျရှိလာတဲ့ ရျောနယျဒိုဟာ
ပွိုငျပှဲ (၉)ပှဲကစားပွီးခြိနျမှာ (၆)ဂိုးသှငျးထားပါတယျ။ သူဟာယနျးဘှိုငျးကို (၂-၁)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့ခနျြပီယံလိဂျ ပှဲမှာတုနျးကလညျး
ကှငျးထဲကလူစားလဲခံခဲ့ရခြိနျမှာ ကှငျးဘေးမှာ ဆိုးလျရှားနဲ့အတူကစားသမားတှကေို အျောဟဈညှနျကွားနခေဲ့ပါသေးတယျ။
ရျောနယျဒိုဘကျက နညျးပွနရောနဲ့ပတျသကျလို့ ဘာစကားမှ မထှကျလာသေးပမေယျ့ ဘှတျကီတှကေတော့ကွေးဖှငျ့နပေါပွီ။
ပရိသတျတှအေနနေဲ့ကကော ရျောနယျဒိုကို ယူနိုကျတကျ နညျးပွအဖွဈ အခုအခြိနျမှာ မွငျခငျြကွရဲ့လား…?
ဆိုးလ်ရှားသာ နည်းပြနေရာက ထုတ်ခံခဲ့ရမယ်ဆိုရင် မထင်မှတ်ပဲ ယူနိုက်တက်နည်းပြမှာ ရော်နယ်ဒို ဖြစ်လာတော့မလား…?
ယူနိုက်တက်နည်းပြဘဝကနေ အချိန်မရွေး ပြုတ်သွားနိုင်ခြေရှိလာတဲ့ ဆိုးလ်ရှားရဲ့အခြေအနေကြောင့် အခုဆိုရင် ဗြိတိန်ဘွတ်ကီဒိုင်တွေက ဆိုးလ်ရှားနောက်မှာ ယူနိုက်တက်နည်းပြ ဘယ်သူဖြစ်လာမလဲဆိုပြီး လောင်းကြေးဖွင့်မှုတွေလုပ်လာကြပါတယ်။
လီဗာပူးလ်ကိုအရှက်တကွဲရှုံးနိမ့်ပြီးနောက်မှာ ယူနိုက်တက် ပရိသတ်တွေနဲ့ ကစားသမားတွေက ဆိုးလ်ရှား ရဲ့နည်းဗျူဟာအပေါ် ယုံကြည်မှုကျဆင်းသွားခဲ့ကြသလို အသင်းကထွက်သွားဖို့ ဖိအား ပေးမှုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။ လီဗာပူးလ်နဲ့ပွဲမှာ ပထမပိုင်းပြီးချိန်မှာတင် ကွင်းထဲက ယူနိုက်တက် ပရိသတ်အတော်များများက ကွင်းထဲကနေထပြန်ကုန်ကြတာကြောင့် အဲ့သည့်ပွဲအပြီးမှာ ဆိုးလ်ရှားချက်ချင်း အထုတ်ခံရတော့မယ်ဆိုပြီး သတင်းတွေထွက်လာခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရပ်ကြောင့်လဲ တနင်္လာနေ့ကဆိုရင် ယူနိုက်တက်ရဲ့မန်းနေးဂျင်းဒါရိုက်တာ ရစ်ချတ်အာနိုးလ်ဟာ ချိန်းဆိုထားတဲ့ appointment တွေ အားလုံးကို ပယ်ဖျက်ပြီး ဂျိုဝယ် ဂလေဇာနဲ့ အရေးပေါ် တွေ့ဆုံမှုကို ချက်ချင်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဆွေးနွေးမှုအပြီးမှာတော့ ယူနိုက်တက် ဘုတ်အဖွဲ့က အက်ဝုဒ်ဝက်ခ်, ရစ်ချတ်အာနိုးလ် နဲ့ဆာအဲလက်စ်ဖာဂူဆန်တို့က ဆိုးလ်ရှားကို ဆက်လက်ထောက်ခံပေးခဲ့တာကြောင့် စပါးနဲ့ပွဲပြီးဆုံးချိန်အထိတော့ ယူနိုက်တက်မှာ ဆိုးလ်ရှား ဆက်ရှိနေဦး မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း ဆိုးလ်ရှားဟာ ကာရင်တန်လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာ အသင်းရဲ့ကစားသမားတွေနဲ့အတူ စပါးနဲပွဲအတွက် လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွေ ပြုလုပ်လျှက်ရှိနေတယ်လို့လည်း သတင်းတွေကဖော်ပြထေားပါတယ်။ သဘောကတော့ ယူနိုက်တက်ဘုတ်အဖွဲ့က ဆိုးလ်ရှား အပေါ် နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အခွင့်အရေးပေးထားတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါပဲ။
ဒါ့အပြင် ဗြိတိန်မီဒီယာအချို့တို့မှာလည်း ယူနိုက်တက်ဘုတ်အဖွဲ့က ဆိုးလ်ရှားကို လာမယ့်သုံးပွဲအထိ အခွင့်အရေးပေးထားတယ် လို့လည်းသိရပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ အံသြစရာသတင်းတစ်ခု ထပ်ဖြစ်လာတာက ခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုဟာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နည်းပြသစ်ဖြစ်လာဖို့ ရေပန်းစားဆုံးနည်းပြစာရင်းမှာပါဝင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသတင်းဟာ ဗြိတိန်ဘွတ်ကီဒိုင် Paddy Power က ခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကို (၁၉ လေး /၁ လေး) နဲ့ ယူနိုက်တက် နည်းပြ နေရာအတွက် ကြေးဖွင့်လာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ရော်နယ်ဒိုက နည်းပြ ဖြစ်လာနိုင်ခြေစာရင်းမှာ နံပါတ်(၇) အဖြစ် ရောက်ရှိလာခဲ့ရာကစတင်ခဲ့တာပါ။
လက်ရှိအချိန်တွင် Paddy Power ရဲ့ယူနိုက်တက် နည်းပြရာထူးအတွက် ရေပန်းအစားဆုံးစာရင်းတွင် အန်တိုနီယိုကွန်တီကို ၈/၁၁ ဖြင့်ဖွင့်လှစ်ပေးထားပြီး ဘရန်ဒန်ရော်ဂျာ(၆/၁)၊ဇီဒန်း(၉/၁)၊အဲရစ်တင်ဟက်(၁၁/၁)၊ပိုချက်တီနို(၁၁/၁)၊ဂရေဟမ်ပေါ့တာ(၁၄/၁)တို့ပါဝင်နေခဲ့ပါတယ်။
နည်းပြနေရာအတွက် ရေပန်းစားနေတဲံစာရင်းမှာ ရော်နယ်ဒိုဟာ နည်းပြအတွေ့အကြုံရင့်နေကြတဲ့ ရန်နစ်ခ်၊လူစီယန်ဖာဗရီ၊ အယ်လီဂရီ၊ မိုက်ကယ်ကာရစ်၊ ဒါရင်းဖလက်ချာတို့ထက် ပိုပြီး လူကြိုက်များနေပါတယ်။
ဒီနှစ် နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက် ပိတ်ခါနီးအချိန်မှာ ယူနိုက်တက်ကို ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲံ ရော်နယ်ဒိုဟာ ပြိုင်ပွဲ (၉)ပွဲကစားပြီးချိန်မှာ (၆)ဂိုးသွင်းထားပါတယ်။ သူဟာယန်းဘွိုင်းကို (၂-၁)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲမှာတုန်းကလည်း ကွင်းထဲကလူစားလဲခံခဲ့ရချိန်မှာ ကွင်းဘေးမှာ ဆိုးလ်ရှားနဲ့အတူကစားသမားတွေကို အော်ဟစ်ညွှန်ကြားနေခဲ့ပါသေးတယ်။ ရော်နယ်ဒိုဘက်က နည်းပြနေရာနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘာစကားမှ မထွက်လာသေးပေမယ့် ဘွတ်ကီတွေကတော့ကြေးဖွင့်နေပါပြီ။ ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကကော ရော်နယ်ဒိုကို ယူနိုက်တက် နည်းပြအဖြစ် အခုအချိန်မှာ မြင်ချင်ကြရဲ့လား…?